राम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्ता छन् उपायहरु ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार १९:१२
तपाईंको तमाम कोशिशका बाबजुद पनि महिला तपाईंसँग आकर्षित हुन्न । आखिरी किन ? यसका लागि तपाईं आफ्नो लुक्स र स्वच्छताप्रति काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
जान्नुहोस् कसरी तपाईं युवतीलाई आकर्षित गर्न सक्नु हुन्छ । राम्रो देखिनु तपाईंको हातको कुरा हो ,आफूलाई राम्रो देखाउन तपाईंको हातको कुरा हो ।
यसका लागि तपाईंको धेरै मेहनत आवश्यक पर्दैन । तपाईं आफ्नो आलस्यता त्यागेर लुक्समा ध्यान दिनु जरुरी छ । आखिरी तपाईंको लुक्सले नै महिलालाई आकर्षित गर्ने हो । यसर्थ थोरै मेहनतमा यस्तो गर्नु जरुरी छ ।
केही कुरामा ध्यान दिनू
भलै तपाईंको लुक्स धेरै राम्रो नहोला तर यसको अर्थ यो होइन की धेरै महत्व पूर्ण कुराको बेवास्ता गर्नु । यसर्थ तपाईंले महत्वपूर्ण कुराको वास्ता नगर्दा युवतीको मन जित्न सक्नु भएन । अब महत्वपूर्ण कुराहरुमा पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
धेरै पसिना आउनु
तपाईंलाई धेरै पसिना आउँछ ? धेरै पसिना आउनुको पनि केही कारण हुन सक्छ । एउटा कारण हुन सक्छ तपाईं गलत कपडा लगाउनु हुन्छ । यसैको कारण हो भने सबै भन्दा पहिले कपडा परिवर्तन गर्नुहोस् । सूती, खाकी, लाइनन् जस्ता प्रकृतिका कपडा लगाउनुहोस् । यसको अलवा तपाईं हाइपरहाइड्रोसिस नामक रोकको पीडित पनि हुन सक्नु हुन्छ । यसर्थ चिकित्सकसँग सम्पर्क राखी धेरै पसिना आउने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नुहोस् ।
तपाईंको दाँत पहेंलो छ ?
खासगरी युवतीले तपाईंलाई जतिखेर हेर्नेछिन, त्यत्तिखेर उसको ध्यान तपाईंको मुस्कानमा पर्नेछ । कतै तपाईंको दाँत पहेंलो छ । विर्सिनुहोस्, ऊ तपाईंसँग डेटिङ जानेछिन् । तपाईंलाई जरुरत यो पर्छकी, आफ्नो दाँतलाई ख्याल राख्नुहोस् र उपचारका लागि चिकित्सकसँग पनि सम्पर्क गर्नुहोस् ।
आँखीभौंको बीचमा रौं छ ?
तपाईंको आँखीभौंको बीचमा रौं छ ? अर्थात तपाईंको आँखीभौं भद्दा खालको छ ? आजको समयमा यस समस्याबाट छुटकारा पाउन कुनै गाह्रो छैन । चाँडो भन्दा चाँडो यस समस्याबाट मुक्त हुनुहोस् । आफ्नो आँखीभौंको हप्तामा एक पटक सफा गर्नुहोस् र यस समस्याबाट मुक्त हुनुहोस् ।
छालामा केही समस्या छ कि ?
तपाईंको छालामा समस्या छ भने यसबाट बच्न दैनिक आफ्नो अनुहार राम्रो फेसवासले धुने गर्नुहोस् । साथै यस कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस् की सबै त्वचा एकै प्रकारका हुँदैनन्, यसर्थ फरक फरक तरिकाले उपचार गर्नुहोस् । यदी कुनै प्रकारको समस्या आए तपाईं तुरुन्त विशेषज्ञ चिकित्सकको सहयोग लिनुहोस् ।
तपाईंको गर्दनमा रौं छ ? केही चिन्ता नलिनूस्, केही पुरुषको गर्दनमा रौं हुन्छ नै । तर तपाईं यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंले गर्दन सम्मको रौं खौरेर फ्याली दिन सक्नु हुन्छ । साथै कपडा लाउँदा पनि देखिने छातीका रौं पनि खौरेर फ्यालिदिनुहोस् ।
केही पहल गर्नुहोस्
तपाईंले अस्वीकार गर्ने डरले युवतीले केही नभनेको हुन सक्छ । यसर्थ यसका लागि तपाईं आफैं पहल गर्नुहोस् । हुन सक्छ तपाईंको पर्खाइमा युवती बसेको हुन सक्छ । एक पटक तपाईं निश्चित हुनुहोस् कि अब तपाईंको परफेक्ट व्यक्तित्वसँगै पहलको पनि आवश्यक पर्छ । यसर्थ तपाईं अघि बढेर युवतीसँग प्रस्ताव गर्ने हिम्मत गर्नुहोस् ।
भनिन्छ नि, ‘मान्छेको बोलीले नै उसको भविश्यको बाटो तय गर्छ ।’ यो भनाइ यसमा पनि लागू हुन्छ । हुन सक्छ कि कुनै युवतीको मनमा तपाईंको लागि केही भावना उठिरहेको छ । तर तपाईंको बोलीका कारण उसले तपाईंलाई टाढा राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ युवतीसँग बोल्ने क्रममा आफ्नो वाणीलाई नियन्त्रित राख्दै सोचेर बोल्नुहोस् ।- स्रोत:मिडिया एनपी
२०७६ आश्विन १६, बिहीबार ०९:४४
यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने बैज्ञानिक दावी
२०७६ कार्तिक २२, शुक्रबार १८:३२
२०७६ माघ २३, बिहीबार २२:२२
दम्पतीको यस्ता आनीबानीले गर्दा कलह उत्पन्न हुन्छ, के – के हुन् ति आनीबानी ? जान्नुहोस ।
२०७६ फाल्गुन २३, शुक्रबार २३:०८
जानिराखौं : कोरोना भाइरस के हो ? यसबाट कसरी बच्ने?
२०७६ माघ १२, आईतवार १८:५५
खतरनाक रोगबाट बचाउँछ तितेपातीले, हेर्नुहोस् ।
२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार १६:२०